विमान दुर्घटनामा सानी छोरी र श्रीमान गुमाएकी बेड न. ४०७ मा बर्बराइ रहेकी २२ बर्षीय यी आमा, यीनलाई देख्दा कसको आखा नरसाउला र ? ( हेर्नुहोस यो हीर्द्यबीदारक भिडियोसहित) – My Blog
Home Uncategorized विमान दुर्घटनामा सानी छोरी र श्रीमान गुमाएकी बेड न. ४०७ मा बर्बराइ रहेकी २२ बर्षीय यी आमा, यीनलाई देख्दा कसको आखा नरसाउला र ? ( हेर्नुहोस यो हीर्द्यबीदारक भिडियोसहित)
विमान दुर्घटनामा सानी छोरी र श्रीमान गुमाएकी बेड न. ४०७ मा बर्बराइ रहेकी २२ बर्षीय यी आमा, यीनलाई देख्दा कसको आखा नरसाउला र ? ( हेर्नुहोस यो हीर्द्यबीदारक भिडियोसहित)
Previous Postदुर्घटनामा निधन भएका पाइलट अबिद सुल्तानको घरमा यस्तो छ हृदयविदारक अवस्था (भिडियो हेर्नुहोस)
Next Postपत्रकार सम्मेलनमा डाक्टरको आयो यस्तो बयान ! विमान दुर्घटनापछि आगलागी हुँदा नराम्ररी जलेका शव पहिचान गर्नै नसकिने अवस्थामा रहेकाले पोस्टमार्टमा जटिलता (भिडियोसहित)